Rikoodhadii laga diiwaan geliyey kulankii Man United ay xalay ka adkaatay Southampton ee EPL … (Maxay ka dhignaayeen goolashii Ibrahimovic?) – Gool FM
Rikoodhadii laga diiwaan geliyey kulankii Man United ay xalay ka adkaatay Southampton ee EPL … (Maxay ka dhignaayeen goolashii Ibrahimovic?)
Haaruun August 20, 2016
(Manchester) 20 Agoosto 2016 – Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa guul ka gaartay xalay naadiga Southampton oo marti ugu ahayd garoonka Old Trafford, waxaana ay uga adkaadeen 2-0.
Zlatan Ibrahimovic oo labo jeer shabaqa soo taabtay ayaa sabab u ahaa in Man United, Mourinho, Pogba oo soo laabashadiisii United kaddib garoonka ku soo bilowday inay guulo ku furtaan kulamada horyaalka ee garoonkooda.
Ibrahimovic ayaa labada gool kala dhaliyey labadii qeybood ee ciyaarta, waxaana goolka hore uu ahaa madax xoggan oo uu dhaliyey 36’daqiiqo, halka goolka labaad uu ahaa Rigoore lagu galay Shaw, waxaana uu gool u rogay 52’daqiiqo.
Haddaba halkaan hoose ka eeg rikoodhadii laga diiwaan geliyey kulanka:-
>- Chelsea oo (82) ah, Liverpool & Arsenal oo midkiiba lagu abaal-mariyey (77) ayaa ka badan gool ku laadyada garoonkeeda loogu dhigay kooxda Man United oo 76 (Rigoore) ku heshay garoonkeeda kulammada Premier League.
>- Manchester United ayaan looga adkaan garoonkeeda kulammada horyaalka, kaddib marka ay qeybta hore hoggaanka hayaan tan iyo bishii May sanadkii 1984-kii, markaasoo inta gool la hormareen ay 1-2 uga adkaatay kooxda Ipswich.
>- Si kale haddii aynu u dhigno Man United ayaan marnaba guuldarreysan kulan Premier League ah oo lagu kala nasto iyadoo hoggaanka ciyaarta haysa, laguna ciyaarayo garoonkooda Old Trafford 252 kulan ka hor kulankii xalay, waxaana ay guul gaareen 238 kulan, halka ay barbaro galeen 14 kulan.
>- Zlatan Ibrahimovic ayaa dhaliyey 29 gool 20-kiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu horyaalka ka soo muuqday kulan ay kooxdiisu ku ciyaarayso gareenkeeda, marka la isku daro horyaallada Ligue 1 & Premier League.
>- Wayne Rooney ayaa xalay saftay kulankiisii 600-aad ee heerka kooxaha, waxaana 523 kulan oo u ciyaaray Man United, halka 77 kulan uu u saftay Everton.
>- Paul Pogba ayaa saftay kulankiisii ugu horreeyey Premier League kaddib soo laabashadiisa kooxda Man United tan iyo 18 bishii Maarso sanadkii 2012-kii, waana muddo haatan laga joogo 1616 maalmood.
>- Jose Mourinho ayaa hadda guul gaaray kulankiisa ugu horreeya ee uu ku ciyaaro garoonka kooxdiisa, kooxihii uu soo layliyey sida Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid iyo Manchester United.
>- Man United ayaa shabaqeeda oo aan la taaban garoonka ka baxday 13 ka mid ah 20-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Premier League ku ciyaartay garoonkeeda Old Trafford.
>- Tababarihii ugu dambeeyey Manchester United ee guul gaara saddexdiisa kulan ee ugu horreeya kooxda waxa uu ahaa Walter Crickmer oo sidaan sameeyey bishii November sanadkii 1937-kii.
>- Jose Mourinho waa tababarihii ugu horreeyey ee Manchester Utd oo 79 sano kaddib guul gaara saddexdiisa kulan ee ugu horreeya kooxda.
>- Zlatan Ibrahimovic ayaa ku lug lahaa 53 gool 32-kiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu horyaal ciyaaray waxa uu dhaliyey 41 gool, isagoo saaxiibadiisna ka caawiyey 12 gool.
>- Ma jiro ciyaaryahan Ingiriis ah oo Premier League kaga caawin badan Manchester United Wayne Rooney tan iyo xilli ciyaareedkii 2013/14, kaasoo caawiyey tan iyo markaas 22 gool.
>- Zlatan Ibrahimovic ayaa gool dhaliyey mid kastoo ka mid ah dhammaan saddexdii kulan ee uu u ciyaaray Manchester United, waxaana uu goolal ka kala dhaliyey 83′ daqiqo vs. Leicester, 64’daqiiqo vs. Bournemouth iyo 36′ daqiiqo vs. Southampton.
>- Zlatan Ibrahimovic ayaa dhaliyey goolal badan oo afar ah, waana in ka badan inta uu Radamel Falcao u sameeyey Man United, kaddib saddex kulan oo qura.
TOOS u daawo: Germany W vs Sweden W - LIVE (Final-ka kubadda cagta Olombikada haweenka)
Rio 2016: Orodyahan Faransiis ah oo isagoo tartamaya Suuliga gaari waayay… + SAWIRRO